7 amin'ireo lapa tsara tarehy indrindra any Espana | Vaovao momba ny dia
7 amin'ireo lapa tsara tarehy indrindra any Espana
Espana dia tany manana tantara lava feno fandresena, ady ary fanovana. Ka tsy mahagaga raha mbola mahita ihany isika anio trano mimanda mahafinaritra izay toa zavatra tsy misy tantara avy any Walt Disney. Betsaka amin'izy ireo no niaritra ny fandehan'ny fotoana sy ny tsy fahampian'ny fikarakaran'ireo tompona miovaova, saingy maro hafa no notehirizina ary mbola manana hatsarana tsy manam-paharoa.
Anio no hasehonay anao 7 amin'ireo lapa tsara tarehy indrindra any Espana, na dia afaka milaza aza isika fa misy maro hafa. Mazava ho azy fa fitsoahana kely fotsiny amin'ny tontolon'ny trano mimanda Espaniola. Manomboka amin'ny avaratra ka hatrany atsimo ary avy any atsinanana ka hatrany andrefana dia afaka mahita toerana misy fomba isan-karazany ianao, misy toerana voatahiry tsara sy atiny mahatalanjona. Raha efa nieritreritra fialan-tsasatra ara-kolotsaina ianao, maninona raha miditra amin'ny làlan'ny lapa?
1 Coca Castle any Segovia
2 Tranon'i Butrón any Vizcaya
3 Castle an'i Ponferrada Templar, any León
4 Tranon'i Loarre any Huesca
5 Castle of Almodóvar del Río any Córdoba
6 Alcazar an'ny Segovia
7 Trano vaovao Manzanares el Real any Madrid
Coca Castle any Segovia
Ity dia iray amin'ireo lapa nofinofy izay manana ny zava-drehetra. Toerana tonga lafatra ahafahana maka sary an-tsaina ny tenantsika ho toy ny mpanjaka tamin'ny vanim-potoana medieval. Voatahiry tsara izy io, ary manana ny zava-drehetra manomboka amin'ny tilikambo ka hatramin'ny batt batt bates, rindrina ary lava moat. Nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX izy io ary trano ao amin'ny Fomban'ny Espaniola Gothic-Mudejar, izay nambara ho Monam-pirenena. Rehefa mandehandeha mamaky ny atiny ianao dia tsy tokony halahelo ny trano firaketana an-tsokosoko Gothic sy ny efitrano fitaovam-piadiana, izay misy mozaika geometrika tsara tarehy.
Tranon'i Butrón any Vizcaya
Ity trano mimanda ity dia firavaka tena manokana, satria manana izany Fomba bizarianina izay tsy tazana any amin'ny faritra hafa any Espana. Tsy isalasalana fa io no iray amin'ireo trano mimanda tany am-boalohany izay hita eto amin'ny firenena. Ity zava-mahatalanjona ity dia nohavaozina tamin'ny taonjato faha-XNUMX, niainga tamin'ny trano Butrón hamadika azy ho trano mimanda tena izy. Izy io dia miorina amin'ny tontolo feno hatsarana voajanahary. Taona vitsivitsy lasa izay dia nampiasaina ho hotely izy ireo izay nanehoan'izy ireo fampisehoana medieval ihany koa. Na izany aza, amidy anio izy io ary tsy azo tsidihina ao anatiny, ka tsy ho hitantsika ny toerana mahafinaritra toy ny kianja filalaovana na ny trano fiangonana taloha.
Castle an'i Ponferrada Templar, any León
Ity lapa ity dia miorina amin'ny faritra Bierzo, eo amin'ny havoana eo anelanelan'ny renirano roa. Ireo toerana eo ambony ireo dia saika voafantina foana, satria toerana stratejika hiarovana ireo lapa izy ireo. Tamin'ny andro taloha, nisy trano mimanda Celtic nijoro teo amin'ny toerany, ary taty aoriana dia natsangana ny trano mimanda, izay nibodo ny Templars hatramin'ny taonjato faha-XNUMX, rehefa lasa fananan'ny Kaontin'i Lemos. Ankehitriny dia voatahiry tsara izy io, na dia teo aza ny zava-misy taona vitsivitsy lasa izay dia nirodana ny ampahan'ny rindrina. Azonao atao ny mitsidika ny anatiny ary mahita ny zorony rehetra.
Tranon'i Loarre any Huesca
Ity lapa ity dia eo an-tampon'ny havoana ihany koa, voahodidan'ny ala maitso. Lapan'ny Romanesque izy io, tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Mety ho toa anao koa io satria ao anatiny ilay sarimihetsika malaza "The Kingdom of Heaven", sarimihetsika Ridley Scott. Ho an'ireo mpankafy an'ity sarimihetsika ity na ireo mpandray anjara mavitrika aminy dia mety ho fitsidihana saika voatery izany. Ny tsy tokony halainao dia ny trano-maizina na ny fomba fijery avy any amin'ny fiambenana.
Castle of Almodóvar del Río any Córdoba
Ity lapa ity dia eo an-tampon'ny havoana iray ary voahodidin'ny zavamaniry karakaraina tsara. Ny niandohany dia nanomboka tamin'ny Fibodoana silamo tamin'ny taonjato faha-XNUMX, na dia vao haingana aza izy ireo no nahita taolan'ny trano mimanda romana, noho izany dia mety ho toerana fiarovana io taloha kokoa io. Nitarina nandritra ny Moyen Âge izy io, ary tamin'ny taonjato faha-XNUMX dia naverina tamin'ny endriny ankehitriny izy io, izay iray amin'ireo voatahiry tsara indrindra. Fitsidihana fitarihana, fampisehoana teatra ary fitsidihana alina no atao ao anatiny.
Alcazar an'ny Segovia
Ity trano mimanda ity dia an'ny Fomba Hispano-Arabo, taonjato faha-XNUMX. Ireo tilikambo kônika tsara tarehy dia miavaka eo an-tampon'ny havoana eo anelanelan'ny renirano roa. Fonenan'i Alfonso VIII izy io, ary ankehitriny dia tsangambato manan-tantara-kanto. Ao an-dapa dia miavaka ny Sala del Trono sy Sala de la Galera. Azonao atao ny mahita ao anatiny ary tranobe misy tantara maro izy io.
Trano vaovao Manzanares el Real any Madrid
Ity lapa ity koa fantatra amin'ny hoe Mendoza. Izy io dia tranobe mimanda misy planina quadrangular tany am-boalohany, misy tilikambo boribory maromaro ary iray izay miavaka, amin'ny endrika octagonal, izay ny haja. Izy io dia natsangana teo amin'ny herin'ny Romanesque-Mudejar, ary manana fomba hafa amin'ireo trano mimanda rehetra izay matetika no tazana any amin'ny tany Espaniôla. Ny galeriana Gothic dia tsy tokony hadino ao anatiny. Iray amin'ireo trano mimanda io izay voatahiry tsara, ary azo atao ny mahita ny antsipiriany rehetra momba ny maso, toy ny tsanganana geometrika na ny varavarankely Gothic.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » España » 7 amin'ireo lapa tsara tarehy indrindra any Espana
JoFort dia hoy izy:
Tena tsy miombon-kevitra.
Ny Castle of Bellver dia manome fihodinana an-tapitrisany amin'ny Castle of Loarre, ny an'i Córdoba ary ny an'ny Segovia.
Mamaly an'i JoFort
maricristi dia hoy izy:
Ny sarin'ny Castle of Loarre dia tsy manao ny rariny. Zara raha hita.
Ary ny Castle an'i Javier sy ny Castle an'i Olite, izay tsy eo dia mahatalanjona ihany koa.
Mamaly an'i maricristi
Mandehandeha any Hiroshima
Ny toerana misy ny Game of Thrones dia nalaina sary an-tsary tany Irlandy Avaratra